I-Airbus Perlan Mission II indizela ngaphezu kwamamitha angu-62,000, ibeka irekhodi lomhlaba ophakeme
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-Airbus Perlan Mission II indizela ngaphezu kwamamitha angu-62,000, ibeka irekhodi lomhlaba ophakeme
Airlines • Airport • I-Argentina Breaking News • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Ubuchwepheshe • Transportation
I-Airbus Perlan Mission II iphinde yaqopha umlando izolo e-El Calafate, e-Argentina, ngokukhuphukela endaweni yengcindezi engaphezu kwamamitha angu-62,000.
Airbus IPerlan Mission II, isinyathelo sokuqala emhlabeni sokushayela indiza engenajini emaphethelweni esikhala, siphinde saqopha umlando izolo e-El Calafate, e-Argentina, ngokukhuphuka ku-stratosphere saya ekuphakameni kwengcindezi okungaphezu kwamamitha angama-62,000 (60,669 feet GPS altitude). Lokhu kusethe irekhodi lomhlaba elisha lokundiza, kusalindwe ukuqinisekiswa okusemthethweni.
I-Perlan 2 glider enengcindezi, eyenzelwe ukuthi ikhuphuke ize ifike ezinyaweni ezingama-90,000, idlule i-Armstrong Line, iphuzu emkhathini lapho igazi lomuntu ongavikelekile lizobila uma indiza ilahlekelwa yingcindezi.
Lokhu kumaka irekhodi lomhlaba lokuphakama kokundiza kwesibili kukaJim Payne noMorgan Sandercock, abashayeli bezindiza ababili bePerlan Project abakhuphuka ubude bePerlan 2 kuya kuma-52,221 amamitha we-GPS ngoSepthemba 3, 2017, esifundeni esifanayo esikude sePatagonia yase-Argentina. Irekhodi lango-2017 lephule irekhodi langaphambilini elalisethwe ngo-2006, ePerlan 1 engacindezelwanga, ngumsunguli wePerlan Project u-Einar Enevoldson noSteve Fossett.
"Lesi yisikhathi esimangalisayo kuwo wonke amavolontiya nabaxhasi be-Airbus Perlan Mission II abazinikele kakhulu ekwenzeni uhlelo lwethu lwendawo engenzi nzuzo lube yinto engokoqobo," kusho u-Ed Warnock, isikhulu se-The Perlan Project. "Ukunqoba kwethu namuhla, nanoma iziphi ezinye izigaba esizifezile kulo nyaka, kuyisiboniso somoya wokuhlola owenziwa yibo bonke abantu kulo msebenzi kanye nezinhlangano ezisisekelayo."
"Ukuqamba kuyisidina ku-aerospace namuhla, kepha uPerlan uhlanganisa uhlobo lokucabanga ngesibindi nobuciko okuyizindinganiso ze-Airbus," kusho uTom Enders, oyi-CEO ye-Airbus. "IPerlan Project ifeza lokho okubonakala kungenzeki, futhi ukuxhasa kwethu lo mzamo kuthumela umyalezo kubasebenzi bethu, abahlinzeki kanye nalabo esincintisana nabo ukuthi ngeke sivumelane nokuthi sibe ngaphansi kokungajwayelekile."
Okunye okuzuzwe kuqala kulo nyaka ngePerlan Project ukusetshenziswa kwendiza ekhethekile yokuphakamisela phezulu kunokusebenzisa indiza ejwayelekile yokundiza. Ngesikhathi kuqhubeka indiza yayizolo, uPerlan 2 udonswe ezansi kwe-stratosphere yiGrob Egrett G520 turboprop, indiza yokuphakama okuphezulu eyenzelwe lo msebenzi ekuqaleni kwehlobo. Isebenza yi-AV Experts, LLC, futhi indiziswa ngumshayeli omkhulu u-Arne Vasenden, u-Egrett ukhiphe iPerlan 2 cishe ngamamitha angaba ngu-42,000, uphahla lwensizakalo olulinganiselwe lwe-Airbus A380.
Ukuze bandizele ezindaweni eziphakeme kakhulu zomkhathi womhlaba, abashayeli bezindiza abakwaPerlan 2 bagibela amaza asentabeni, isimo sezulu esenziwa lapho kukhuphuka imisinga yomoya ngemuva kwezintaba iqiniswa kakhulu yi-polar vortex. Le nto yenzeka isikhathi esifushane kuphela unyaka nonyaka ezindaweni ezimbalwa nje emhlabeni. Ebekwe ngaphakathi kwezintaba ze-Andes e-Argentina, indawo ezungeze i-El Calafate ingenye yalezi zindawo ezingavamile lapho le mimoya yomoya ekhuphuka ingafika ezinyaweni ezingama-100,000 noma ngaphezulu.
Eyakhelwe e-Oregon nasekhaya eMinden, eNevada, i-Perlan 2 glider ifaka izinto eziningi ezihlukile ukuze inike amandla umgomo wayo wokuvelela:
• Isihluthulelo se-carbon-fiber esisebenza kahle ngendlela eyingqayizivele, nesistimu yokufaka ingcindezi yekhabethe eqeda isidingo se-compressors esindayo, elambele amandla.
• Uhlelo oluhlukile lokuvala kabusha i-loop, lapho i-oksijini kuphela esetshenzisiwe yilokho iqembu elikusebenzisayo. Luhlelo olulula kakhulu nolusebenza kahle kakhulu lwendlu evaliwe, futhi ukwakheka kwalo kunezicelo zezinye izindiza eziphakeme kakhulu.
• I-boardboard “system visualization” ekhombisa ngokusobala izindawo zomoya okhuphukayo nowizikayo kuma-cockpit. Ezindizeni zezentengiselwano, ukulandela imigqa yomoya okhuphukayo kungavumela ukukhuphuka okusheshayo futhi konge uphethiloli, kuyilapho kusiza nezindiza ukuthi zigweme izinto eziyingozi njengokuchema komoya kanye nokwehliswa okukhulu kwempahla.
Ngokungafani nezindiza ezisebenza ngocwaningo, iPerlan 2 ayithinti izinga lokushisa noma amakhemikhali omoya awuzungezile, okwenza kube yindawo efanelekayo yokufunda umkhathi. Ukuhlolwa okwenziwe kwaqhutshelwa phezulu ethekwini lezinsimbi zalo kuveza okutholakele okusha okuhlobene nokundiza okuphezulu kakhulu, isimo sezulu kanye nokuguquka kwesimo sezulu.
Kule sizini, uPerlan 2 undiza ngezivivinyo ezakhiwe yikomidi lezesayensi nocwaningo lePerlan Project, kanye namaphrojekthi enziwe ngokubambisana nezinhlangano nezikole e-US nase-Argentina. Amaphrojekthi ocwaningo lwePerlan 2 njengamanje afaka:
- Ukuhlolwa kokulinganisa imiphumela yemisebe ezindaweni eziphakeme kakhulu, eyenzelwe abafundi baseCazenovia Central School nase-Ashford School eConnecticut. Le phrojekthi isebenzisana neTeachers in Space, Inc., inhlangano yezemfundo engenzi nzuzo evuselela intshisekelo yabafundi kwezesayensi, ezobuchwepheshe, ezobunjiniyela nezezibalo;
- Irekhoda yemininingwane yendiza, eyenziwe yi-Instituto de Investigaciones Científicas yase-Argentina y Técnicas para la Defensa (CITEDEF);
- Irekhoda yesibili yendiza, eyenzelwe abafundi eLa Universidad Tecnológica Nacional yase-Argentina (UTN);
- Ithuluzi lesikhala sezulu (imisebe);
- Ukuhlolwa okunesihloko esithi "Marshmallows in Space," okwenziwe yi-Oregon Museum of Science & Discovery ukufundisa inqubo yesayensi kwabasenkulisa.
- Izinzwa ezimbili ezintsha zemvelo, ezakhiwe yiPerlan Project.
IPerlan 2 izoqhubeka nokulandela izindiza eziphakeme futhi yenze ucwaningo e-stratosphere njengoba isimo sezulu nemimoya kuvuma maphakathi noSepthemba.
Indiza enabantu abangu-6 abagibelayo iyanyamalala e ...
Izidingo Zomuthi Omusha wase-Canada
I-Tourism yamazwe amaningi, ehlanganisa ababambiqhaza abaningi...
Inkampani yase-Asian Transformative Pharmaceutical Products...